Bangaki amaholide eziye zonakaliswa nje ngoba abantu bakuthathe kalula usongo yelanga! Ngokuqinisekile ezishukiwe umzimba bronzed yinhle futhi emuhle. Kodwa zonke kufanele kube ngesilinganiso. Futhi uma zihlukunyezwa bethamele ilanga, bese imiphumela ingaba ngempela eyinhlekelele. Burns, ubuhlungu, imfiva - lokhu akukona konke ngemiphumela isifiso abanothando futhi ezinganeliseki okusemandleni ukuze libe nsundu. Kodwa uma umuntu kwashiswa ilanga, yini okufanele uyenze futhi kanjani ukusiza yena kufanele wazi.
artisan anamakhono ingase ithinte antiinflammatories. Indlela yabo kuzovimbela umonakalo omkhulu isikhumba. Futhi ngaphezu mikhiqizo ekhethekile, kuyasiza ukuthatha imithi - "ibuprofen" futhi "aspirin". Lezi amaphilisi futhi ususe ubuhlungu.
Uma umuntu wokushiswa e ilanga, ukuthi wenzeni, ngezinye izikhathi kodwa akunjalo. Ngokwesibonelo, uyazi ukuthi kudingeka baphuze amanzi amaningi? Phela, imisebe yelanga dehydrate kakhulu emzimbeni. Uketshezi eyomsiza ukuba ngilulame, futhi kufanele kuthathe, ngisho noma ungenawo Ngilambile. Uma umuntu kushiswe ilanga - yini okumele ngiyenze? Okokuqala, ushawa. Kuphela kufanele kube cool, hhayi ashisayo. Futhi ungasebenzisi leli insipho, kungcono makudle ijeli esithambile.
Uma uthola i-yilanga, kodwa kufanele siqhubeke ibe ngaphansi-ray, kubalulekile ukuvikela endaweni ezilimele isikhumba ngosizo iduku, izingubo. Kanti-ke futhi ukuze sunbathe kuphela Ekuseni nantambama. Esigcakini kule ukushisa okuhangulayo nje silly.
Uma yilanga, yini okufanele uyenze? Lo mbuzo ukufika ekhaya sibi kakhulu. Nanka amathiphu ambalwa ukukusiza ukususa ububomvu, ubuhlungu futhi esivuthayo isasasa. Okokuqala, isikhumba ezilimele ungakwazi gcoba ukhilimu omuncu amafutha okusezingeni eliphezulu noma yogurt cool. Kuyasiza ujusi amazambane. Okwesibili, zama yenza itiye eqinile oluhlaza, wasiqashisa cool futhi wenze cindezela usebenzisa gauze. Shiya ke esikhumbeni amaminithi angu-10. Okwesithathu, niyothola kanye vodka abavamile. Uma nivame kuwo endaweni sikhanyise, ngosuku olulandelayo, iyakuphenduka zethusi ansundu. Okwesine, njalo kusiza Aloe. Amahlamvu kufanele ibekwe efrijini kuze kuphele isigamu sehora, bese ijusi kuzo amafutha ukusha.
Manje umbuzo abesifazane amakhasimende Pharmacy: "Mina kwashiswa ilanga. Yini okumelwe uyenze? Ngicela ungitshele "-! Ngokuvamile esikhundleni ukuphendula ngokushesha ukunikela ekhethekile izifutho, foams noma si. Ngemva lokusebenza isikhumba ubuhlungu amuke cishe ngokushesha. Lapho belungela ukuya khona "Panthenol" inganikelwa njengezibonelo.
Uma kushiswe ilanga, kungcono ukuyeka ukuphuza utshwala. Utshwala equkethwe kuwo, bome out isikhumba, okuzokwenza babhebhethekise isimo eziyinkinga kakade.
Abantu abaningi bakhathazekile ngomphumela iguliswa ilanga. Yini eshukumisela i Udokotela awe-aleji noma wesikhumba. Kunoma ikuphi, inkinga enjalo akunakugwenywa.
Uma uya eholidini, musa skimp on ukuthengwa okhilimu obalulekile kusuka ngomhla ka yilanga kanye ukushuka. Futhi ngaphambi kokuba uyisebenzise unqume ukuthi umgomo wakho - ukuze uthole nice bushelelezi zethusi isikhumba ithoni nokulondoloza umbala yayo yasekuqaleni. Ukhilimu ingakhetfwa ngesisekelo abathela ke. Musa ukuthenga izimonyo womuntu ongabazisayo.
Veneers Composite: ukubuyekezwa. veneers Composite: Ngaphambi & Ngemuva